အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (လူမှုရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (လူမှုရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း
အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (လူမှုရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း
Posted by ကိုငြိမ်းအေး on Feb 12, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
(http://myanmargazette.net/98745/uncategorized-other/copypaste ရှိသော မသိမှု ဖြစ်စဉ် သီအိုရီ (အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ)ပုံစံဖြည့်ခြင်း အဆက် ဖြစ်ပါသည်။)
“အ၀ိဇ္ဇာ“လို့ဆိုရတဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာကို မသိပါက ထိုသူသည်
“သင်္ခါရ“လို့ ဆိုရတဲ့ မှားယွင်း၊ လွန်ကဲစွာ ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်တော့မှာဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ မှားယွင်း၊ လွန်ကဲစွာ ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်မိပါက နောက်ဆုံးမှာ
“ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ“ဆိုသည့် ဆင်းရဲခြင်းတွေ၊ မငြိမ်းချမ်းတွေပဲ ရရမှာ အမှန်ပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် “ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ နိရောဓော ဟောတိ” ဆိုသည့် ဆင်းရဲခြင်းတွေ၊ မငြိမ်းချမ်းတွေကင်းပျောက်ကာ ချမ်းသာခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ရောက်လိုပါက
“၀ိဇ္ဇာ“လို့ ဆိုရတဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘယ်အကြောင်းအရာတွေဟာ သိသင့်တာလဲ၊ သိထိုက်တာလဲဆိုတာ ဝေဖန်မိဖို့လိုပါတယ်။
လူသားတွေဟာ နေ့စဉ် ကိုယ်ဆိုင်ရာ၊ ဆိုင်ရာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေကြရခြင်းကြောင့် လူသားနဲ့ အလုပ်ဟာ ကင်းကွာလို့ မရပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်မဖြစ်မနေ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်၊ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သိသင့်တာမှန်သမျှကို သိအောင်ပြုလုပ်ထားမှသာလျှင် အမှားအယွင်းကင်းကင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်၊ ဆက်ဆံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် “မိတ်ဆွေများနှင့် ပတ်သက်လို့”
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအချင်းချင်းဆက်ဆံရာတွင်လည်း တစ်ဦးအကြောင်းကို တစ်ဦးက သိသင့်တာမှန်သမျှ သိရှိထားမှသာလျှင် ထိုမိတ်ဆွေအပေါ်မှာ အပြုမှန်၊ အပြောမှန် အနေအထိုင်မှန်မှန်ဖြင့် ဆက်ဆံနိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဆက်ဆံမှုဖြစ်နေမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာမှန်သမျှ သိရှိထားခြင်းမရှိပဲ ဆက်ဆံမိပါက မိတ်ဆွေအပေါ်မှာ အပြုမှား၊ အပြောမှား၊ အနေအထိုင်မှားတို့ ဖြစ်သွားကာ မငြိမ်းချမ်းသောအခြေအနေသို့ ရောက်ရပါလိမ့်မည်။
ဒါ့ကြောင့် မိမိတို့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်ဆံနေထိုင်လိုလျှင်
ကိုယ့်အတူနေ အိမ်သားများ၊ အိမ်နီးနားချင်းများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ အပေါင်းအသင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာမှန်သမျှကို သိအောင်ပြုလုပ်ထားမှသာလျှင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံနေထိုင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ “ဇနီးမောင်နှံ” တို့နှင့်ပတ်သက်လို့လည်း
လင်မယား၊ ဇနီးမောင်နှံဆိုတာ မိဘဆွေမျိုးတို့ထက် ပိုရင်းနှီးနေရတဲ့ ဘ၀အဖော်မွန်တွေပါ။
အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ကြသည့်အခါမှာ လင်ဖြစ်သူကလည်း မိမိ မယားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာမှန်သမျှကို သိထားဖို့လိုသလို မယားဖြစ်သူကလည်း မိမိ လင်ယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာမှန်သမျှကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။
ယောက်ျားဖြစ်သူအနေနဲ့ မိမိဇနီမယားက ဘယ်လိုကိစ္စတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတတ်တယ်။ ဘာကိုတော့ စိတ်မ၀င်စားတတ်ဘူး။
ဘယ်လိုအပြုအမူအပြောအဆိုမျိုးကို နှစ်သက်တယ်၊ မနှစ်သက်ဘူးဆိုတာတွေ စသဖြင့် သိထားဖို့လိုသလို
ဇနီးဖြစ်သူကလည်း မိမိယောက်ျားရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ အလေ့အထ၊ အကြိုက်၊ စရိုက်တို့ကိုလည်း သိထားဖို့လိုပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ဇနီးမောင်နှံအချင်းချင်းအပြန်အလှန် သိသင့်တာတွေကို အကြောင်းအကျိုး သိထားမှသာလျှင် မှားယွင်းသော၊ လွန်ကဲသော အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်တို့ မပြုမိကြတော့ပဲငြိမ်းချမ်းသာယာစွာနေထိုင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သိသင့်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတို့တွင် လူဟာ မိမိအကြောင်းကို မိမိအမှန်အတိုင်းသိဖို့ရာက ပိုမိုအရေးကြီးပါတယ်။ မိမိဟာ ဘယ်ကိစ္စတွေမှာ စိတ်ထက်သန်တယ်၊ စိတ်မထက်သန်ဘူး။ ဘယ်အကြောင်းအရာမျိုးကို စိတ်ရှည်တယ်၊ စိတ်မရှည်ဘူး။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ စိတ်မ၀င်စားဘူး။
ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးကိစ္စတွေ မှာ ဘယ်မှာအားကောင်းတယ်၊ ဘယ်မှာက အားမကောင်းဘူးစတဲ့ မိမိရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်တွေရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကိုလည်း သေသေချာချာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ သိထားမှသာလျှင် မိမိနေ့စဉ် လုပ်ကိုင်၊ ပြောဆို၊ နေထိုင်နေရတဲ့အဖြစ်တွေမှာ အပို၊ အလိုတွေ မပြုမိတော့ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် လူသားတွေအနေနဲ့ မိမိနှင့်တကွ ဆက်ဆံနေရသော ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ်မှာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ (မောဟ)ဖြင့် နေထိုင်တာမဟုတ်ပဲ သိသင့်သိထိုက်တာ မှန်သမျှကို သိသူ (၀ိဇ္ဇာ) ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်မှသာလျှင် မှားယွင်း၊ လွန်ကဲသည့် အလုပ် (သင်္ခါရ)များ မပြုမိပဲ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု (ဒုက္ခနိရောဓ) အပြည့်အ၀ဖြင့် နေထိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။
(ဆက်လက်၍ စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် ပုံစံဖြည့်တင်ပြပါဦးမည်။)
ယနေ့ခေတ်သည် ပညာခေတ်ကို ရောက်နေခြင်းကြောင့် ပညာရပ်ပုံစံ ဖွင့်ဆိုမှုအား ကြိုဆိုပါသည်။
See here for right understanding;
True Answer ရယ်၊ သူက ဘာသာရေးပိုစ့် မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းပါလို့ ဆိုထားပါရက်နဲ့ နင်က အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ နင့် (ဘိန်းစွဲနေသလို) တယူသန် ဘာသာရေးပိုစ့်တွေ ညွှန်ပေးပြီး ၀င်ရှုတ်နေလို့ ငါဝင်ပါနေရပြန်ပြီ။ မရှိတာထက် ၊ မသိတာခက်ဆိုတာ နင့်ကို ပြောတာထင်တယ်။
အင်လေး . . . ။ ဒီပိုစ့်ကလည်း မသိမှုကြောင့်ဖြစ်နေရတဲ့ ဒုက္ခဖြစ်ထွေတွေကို ကိုငြိမ်းအေးက ရေးထားတော့ နင့်မလဲ အလိုက်မသိတော့ ၀င်ရှုတ်နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ဖြစ်နေရတာပေါ့။
(လူဟာ မိမိအကြောင်းကို မိမိအမှန်အတိုင်းသိဖို့ရာက ပိုမိုအရေးကြီးပါတယ်)ဆိုတာမှာ
မိမိရဲ့ ဘယ်အကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းသိအောင်လုပ်ရမှာလဲ ?
မိမိဆိုတဲ့ ဒီလူကိုယ်ကောင်အထည်ကြီးအကြောင်းကို သိအောင်လုပ်ရမှာလား ?
ဒီလူရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ရုပ်၊ နာမ်အကြောင်းကို သိအောင်လုပ်ရမှာလား ?
ဒီလူက လွန်ကျူးတတ်တဲ့ အမှု (ကံ)တွေအကြောင်းကို သိအောင်လုပ်ရမှာလားဆိုတာကိုတော့ ကွဲကွဲပြားပြား ဝေဖန်မိဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
လူသားတွေ လူလူချင်း ဆက်ဆံနေထိုင်ကြလို့ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်နေရတာဟာ လူသားတွေရဲ့ ရုပ်တွေ၊ နာမ်တွေကြောင့်လား၊
တစ်ဦးအကြောင်းကို တစ်ဦးသိလာကြမယ်၊ တစ်ဦးအလုပ်ကို တစ်ဦးနားလည်လာကြမယ်ဆိုရင် လူသားတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေဟာ အမှားအယွင်းကင်းကင်းနဲ့ ပြုမူဆက်ဆံနိုင်လာကြပါလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဒါေ့ကြာင့် လူ့ငြိမ်းအေးမှုကို လိုလားကြတယ်ဆိုရင် လူတွေရဲ့ လွန်ကျူးတတ်တဲ့ အမှု (ကံ)တွေအကြောင်းကို သိနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်လို့ ဖြေလိုက်ပါရစေ။
မ်ိဘတွေသည် မိမိတို့ သား၊ သမီးများဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းနေလဲစသည်တို့ကိုလည်း သိဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သား၊ သမီးတွေ နေတာ၊ ထိုင်တာ၊ လုပ်နေ၊ ကိုင်နေတာတွေအပေါ်မှာ ပေါ့ပေါ့ဆဆ သတိမမူပဲ နေခဲ့မိလို့ – – –
ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးဟာ သားဖြစ်သူ အဇာတသတ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော့
ဒေ၀ဒတ်ဆိုတဲ့ အပေါင်းအသင်းအမှားနဲ့ ပေါင်းနေတာတွေ၊ လုပ်နေ၊ ကိုင်နေတာတွေကို မသိခဲ့လို့ ၊
ကိုယ့်သားအကြောင်းကို သေသေချာချာသိအောင်မလုပ်ခဲ့လို့ ၊
မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားထံသို့ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာတွေကို မလုပ်ခဲ့လို့ပဲလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါသည်။
လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်သိနားထားဖို့ရာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
လူတွေပြဿနာဖြစ်လို့ မငြိမ်းကြခြင်းများသည် နားလည်မှုလွဲမှာနေခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုကဲ့သို့ နားလည်မှုလွဲမှားသော (အ၀ိဇ္ဇာ) ကြောင့် တစ်ဦးပေါ် တစ်ခု လွန်လွန်ကဲကဲ ပြုမှု (အဘိသင်္ခါရ)တွေဖြစ်လာကြပါသည်။
ထိုအခါ ပြဿနာ မငြိမ်းချမ်းသော (ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ) ဖြစ်စဉ် (သံသရာ)တွေ ဖြစ်လာရမှာ မလွဲပါ။
ထို့ကြောင့် သံသရာ အစ အ၀ိဇ္ဇာ က . . . .
ပြဿနာဖြစ်စဉ် အစ နားလည်မှုအလွဲမှ . . . .လို့ နားလည်ကြည့်မိပါသည်။
ဒါ့ကြောင့် ပညာရှင်တွေက “သိခြင်းဟာ ခွင့်လွတ်ခြင်းပါပဲ”ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အမှုကိစ္စရပ်တွေကို သေသေချာချာ သိရှိကြမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအမှုကိစ္စတွေမှာ သည်းခံ နားလည်ပေးမှုတွေ ဖြစ်လာကြပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံနိုင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။